realme X50 Pro 5G ကို တန်ဖိုးသင့် Flagship ဖုန်းလို့ ပြောနိုင်မလား?
MWC ပွဲပျက်သွားလို့ အလံတင်သင်္ဘော (Flagship) ဖုန်းထုတ်ကြွားရမယ့်ကာလ ပျောက်ဆုံးသွားချိန် Manufacturer တွေ ဘာလုပ်နေကြလဲ? ဗိုင်းရပ်စ်ကလည်း လက်ရှိချိန်ထိ ထိန်းချုပ်မရသေးတော့ ကျိုကြား၊ ကျိုကြား မိတ်ဆက်လာတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တုန်းက Galaxy S20 စီးရီးနဲ့ Mi 10 တို့ ပွဲခင်းခဲ့သလို ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ခါနီး ၁ ပတ်လောက်အလိုမှာ Sony နဲ့ realme တို့ အဆက်မပြတ်သွားအောင် သွေးဆောင်ထားပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း လက်လှမ်းမီသလောက် ဖုန်းသတင်းတွေကို ဂဃနဏ တင်ပြနေတာနဲ့အညီ အိန္ဒိယမှာ ကြေညာသွားတဲ့ realme X50 Pro 5G က ဘာထူးသွားပြီလဲ? အတင်းအုပ်ကြတာပေါ့။
X50 Pro 5G Design
တစ်ခါတလေ realme ဖုန်းအကြောင်း ပြောရတာ ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီဇိုင်းများများစားစား မရှိဘဲ နာမည်ပဲ ကွဲထွက်နေတာကြောင့် Product Timeline ကြည့်လိုက်ရအောင် နာမည်တစ်မျိုးအောက်မှာ အနည်းဆုံး မော်ဒယ် ၂ မျိုး ၊ ၃ မျိုး ကွဲနေတတ်ပါတယ်။
အခု realme X50 Pro 5G ဆိုတာလည်း Pro တစ်လုံးကလွဲပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်း အတူတူပါ။ Dual punch-hole သုံးတာကအစ ကင်မရာလေးလုံးကို ဒေါင်လိုက် Alignement ထားတာခြင်း တူသလို ကိုယ်ထည်ပိုင်းမှာလည်း Glass Body + Metal Frame နဲ့ ဖွဲ့နွဲ့ထားပါတယ်။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ Pro မော်ဒယ်မှာ ကင်မရာ Specs အနည်းငယ် ပြောင်းထားပြီး LED flash အပေါ်၊ အောက်ထားတဲ့ နေရာတွေတော့ ကွဲနေပါတယ်။
မပြောစဖူး Ports တွေကို ရွတ်ပြရရင် SIM Tray တစ်ခု၊ Microphone ပေါက် နဲ့ USB Type-C တို့ ပါတယ်။ Volume နဲ့ Power ခလုတ်တွေကို ညာဘက်မှာ တပ်ပေးထားတယ်။ နားကြပ်ပေါက် လည်းပါမလာဘူး။
Now with OLED
အိုလက်မှ မသုံးရင် အရာသွင်းမခံရဘူးလို့ သတ်မှတ်နေတဲ့ခေတ်မှာ IPS ကနေ 90Hz ၊ AMOLED Display သုံးထားပါပြီ။ ပိုကောင်းသွားတယ်လို့ ထင်သွားတဲ့သူတွေအတွက် 120Hz ၊ ဒီကောင်က ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင် ပိုမိုက်တယ်။
OLED မှာကျ Refresh Rate နည်းသွားပေမယ့် HDR10+ Certified Display ဖြစ်သွားတယ်။ Entertainment ပိုင်းတွက် ပိုလန်းသွားတယ် ဆိုရမယ်ပေါ့။
နည်းနည်း အကျယ်ချဲ့ရမယ်ဆိုရင် 6.44″ မျက်နှာပြင်မှာ Dual Punch-hole Notch တပ်ဆင်ထားပြီး 20:9 Aspect Ratio ရှိမယ်။ Screen-to-body Ratio က 84.9% ရှိပေမယ့် ကျနော့် Personal အမြင်ရ IPS Panel ထက် Chin ပိုသေးမယ်။
Full HD+ (1080 x 2400) Resolution ကိုပဲ ဆက်သုံးထားပြီး AMOLED မျက်နှာပြင်မှာ In-Display Fingerprint Scanner ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Cameras! but minor Difference
ထုံးစံအတိုင်း Quad Camera Setup နဲ့ ပွဲထွက်ထားပြီး 64 MP Main Camera နဲ့အတူ 12MP Telephoto Camera ၊ 8 MP Ultra Wide Angle Lens ၊ 2-megapixel depth sensor တို့နဲ့ ပွဲထွက်လာတယ်။
ပြောရင်တော့ X50 5G နဲ့ အတူတူပဲ။ GSMArena မှာ နှိုင်းယှဥ်ထားချက်အရ Tele-lens တစ်လုံးပဲ Aperture အရွယ်စား (f/3.0 vs f/2.5) ပြောင်းသွားတယ်။ Feature လုပ်တာခြင်းလည်း ပုံစံတူတဲ့အတွက် ဘယ်နေရာမှာ Pro သွားလဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်။
ဒါကတော့ Feature အသစ်ပေါ့၊ realme အဆိုရ SAT Smooth Zoom ဟာ Photo နဲ့ Video Mode အကြား ချောချောမွေ့မွေ့ပြောင်းနိုင်မှာပါ။ Video ပိုင်းမှာတော့ 4K Video တွေကို 30fps နှုန်း ရိုက်နိုင်မယ်။
Selfie Camera လုပ်ဆောင်ချက် အတွက်ကိုလည်း UIS Max Super Video Stabilization သုံးပေးလိုက်ပြီ။ ဘာမှန်းတော့ မသိရပေမယ့် Ultra-wide ဗီဒီယို ရိုက်လာနိုင်မယ်။
အဲ့ဒီအတွက် 32 MP Wide Camera Lens အပြင် 105° field of view ရတဲ့ 8MP Ultra-wide Lens ကို UIS Function အတွက် ထည့်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Realme X50 Pro 5G မှာ Qualcomm ရဲ့ 5G modem (Snapdragon X55) ပါတဲ့ Snapdragon 865 Chipset နဲ့အားဖြည့်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကွာသွားတဲ့အချက်က Snapdragon 730G အပြင် ပါဝါစား ပိုသက်သာပြီး ၁.၃ ဆ မြန်ဆန်တဲ့ LPDDR5 12GB RAM နဲ့ USF 3.0 256GB Storage သုံးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ Pro ဂုဏ်ပုဒ်ကို ထိန်းထားလိုက်ပြီး Flagship Level လိုက်နေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးမှာ အေးမြမှုအတွက် Vapour Cooling စနစ် ထည့်ထားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲ အပြောခံနေရတဲ့ Audio ပိုင်းတွက်ကိုလည်း Dual Speakers သုံးပစ်လိုက်တယ်။
အဲ့အတွက် နာမည်တောင် တပ်ထားသေး၊ ဘာတဲ့ Super Linear Speaker ဆိုလားပဲ
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ Pro Version ထွက်လာချိန် ကိုယ်ပိုင် UI ကလည်း အဆင်သင့် ဖြစ်နေတော့ နောက်တနည်း ပြောရရင် Brand Image ပိုတက်လာပြီ။ ဒါပေမယ့် ColorOS7ကို ပြန်ရွှိုင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီး Android 10 နဲ့ ပွဲထုတ်ထားတယ်။
Battery ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း 65W Speed နဲ့ အားသွင်းနိုင်တဲ့ SuperDart Charging စနစ် ပါဝင်လာပြီး 30W Speed နဲ့ VOOC 4.0 ထက် ၂ ဆ ပိုမြန်မယ်၊ ဒီအနေထားက Mi 10 စီးရီး ပိုသာသွားသလို လက်ရှိ အမြန်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရတယ်။
100% ပြည့်အောင် သွင်းမယ်ဆိုရင် 35 မိနစ်ပဲကြာတယ်လို့ realme ဆိုထားလို့ မဆိုးဘူးလို့ သုံးသပ်ရပါမယ်။
ကယ်..ဘယ်လိုပဲ Specs ကြမ်းကြမ်း၊ အရေးကြီးဆုံးက စျေးနှုန်းဆိုတော့ X50 Pro 5G ကို ဘယ်လောက်နဲ့ ရနိုင်မလဲ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒီစျေး၊ ဒီတန်ဖိုးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောင်းချသွားမလားကိုတော့ အတိကျ မပြောတတ်သေးပါဘူး။
6GB RAM/128GB Storage – မြန်မာငွေ ၇ သိန်း ၆ သောင်းကျော်
8GB RAM/128GB Storage – မြန်မာငွေ ၈ သိန်း ကျော်
12GB RAM/256GB Storage – မြန်မာငွေ ၉ သိန်း ကျော်